ပင်မနေရာ ကြားဖြတ်သတင်း ယမ်းခိုးတွေဝေနေတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း
ယမ်းခိုးတွေဝေနေတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း	Monday, 26 September 2011 20:22	User Rating: / 1
PoorBest ??????????????? K.I.A ????????????
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ကျိန်းနမ့်ဇွပ်ရွာအနီးတဝိုက်တွင် K.I.A အထူးကာကွယ်ရေး တပ်ရင်းနှင့် K.I.A ပြည်သူ့စစ် (MHH) တို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်...
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ကျိန်းနမ့်ဇွပ်ရွာအနီးတဝိုက်တွင် K.I.A အထူးကာကွယ်ရေး တပ်ရင်းနှင့် K.I.A ပြည်သူ့စစ် (MHH) တို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ ခလရ (၃၇) ကို ဝိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက်နေကြောင်း၊ ယခုချိန်ထိ မရပ်မနား တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြောင်း ကျိန်းနမ့်ဇွပ်ရွာသားများထံမှ စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။ နှစ်ဘက် စလုံးရဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအခြေ အနေကိုတော့ ဆက်လက် စုံစမ်းပြီး ဖော်ပြသွားပါမည်…။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာပင် K.I.A နယ်မြေဖြစ်တဲ့ ရှဒန်ပါ မန်နောင်ကျေးရွာ ဘက်တွင် စစ် အာဏာရှင် အစိုးရဘက်မှ စစ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ချီတက်လာနေကြောင်း၊ ယခုချိန်တွင် K.I.A နှင့် တိုက်ပွဲများ စတင် ထိတွေ့ပစ်ခတ်နေ ပြီဖြစ်ကြောင်း K.I.A နှင့် နီးစပ်သူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 14:50 )